YouTube सदस्यहरू खरिद गर्नुहोस्
युट्युब प्याकेज सम्झौता खरिद गर्नुहोस्
युट्युब घडी घण्टा खरीद गर्नुहोस्
युट्युब दृश्यहरू खरीद गर्नुहोस्
YouTube मनपर्नेहरू खरिद गर्नुहोस्
YouTube टिप्पणीहरू खरीद गर्नुहोस्
यूट्यूब शेयरहरू खरिद गर्नुहोस्
यूट्यूब एम्बेडहरू किन्नुहोस्
YouTube च्यानल मूल्यांकन खरीद गर्नुहोस्
YouTube भिडियो SEO खरीद गर्नुहोस्
YouTube ग्राफिक डिजाइन किन्नुहोस्
नि: शुल्क YouTube दृश्यहरू
इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू किन्नुहोस्
इन्स्टाग्रामको लागि स्वचालित अनुयायीहरू खरिद गर्नुहोस्
इन्स्टाग्राम मनपर्ने खरिद गर्नुहोस्
Instagram को लागि स्वचालित मनपर्नेहरू किन्नुहोस्
इन्स्टाग्राम दृश्यहरू किन्नुहोस्
इन्स्टाग्राम टिप्पणीहरू किन्नुहोस्
इन्स्टाग्राम मार्केटिंग प्याकेज डील खरीद गर्नुहोस्
नि: शुल्क ट्विच अनुयायीहरू
ट्विच अनुयायीहरू किन्नुहोस्
ट्विच च्यानल दृश्यहरू खरीद गर्नुहोस्
Pinterest अनुयायीहरू किन्नुहोस्
Pinterest मनपर्ने किन्नुहोस्
टिकटोक फ्यान / अनुयायीहरू खरीद गर्नुहोस्
टिकटोक लाइकहरू किन्नुहोस्
टिकटोक दृश्यहरू खरीद गर्नुहोस्
टिकटोक सेयरहरू खरीद गर्नुहोस्
टिकटोक टिप्पणीहरू खरीद गर्नुहोस्
SoundCloud प्ले किन्नुहोस्
SoundCloud डाउनलोड किन्नुहोस्
SoundCloud अनुयायीहरू किन्नुहोस्
SoundCloud मनपर्नेहरू किन्नुहोस्
Soundcloud टिप्पणीहरू किन्नुहोस्
SoundCloud Reposts किन्नुहोस्
Spotify खेलहरू खरीद गर्नुहोस्
मेरो विगतका अर्डरहरू
नि: शुल्क यूट्यूब सदस्यहरु पाउनुहोस्
१००% ग्यारेन्टी डेलिभरी
कुनै पासवर्ड आवश्यक छैन
१००% सुरक्षित र निजी
YouTube ग्राहकहरू खरीद गर्नका फाइदाहरू के हुन्?
अरूलाई तपाइँको च्यानलको सदस्यता लिन प्रोत्साहित गर्दछ
सदस्यहरू टाँसिनेछन र हटाइने छैन
सुरक्षित र ग्यारेन्टी डेलिभरी
२ 24-72 घण्टा भित्र परिणामहरू सुरू हुन्छन्
प्रति दिन -10०-२०० सदस्यहरूबाट कहिँ पनि प्राप्त गर्नुहोस्
हामी सँधै तपाईको अर्डर भन्दा बढी डेलिभर गर्दछौं!
शीर्ष कारणहरू किन तपाईंले YouTube सदस्यहरू किन्ने विचार गर्नुपर्छ
YouTuber बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? YouTube एक सामाजिक शक्ति र विश्वव्यापी घटना हो जसले विश्वभरका अरबौं दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्छ। चाहे तपाईं एक स्थापित व्यवसाय हो, एक स्टार्ट-अप हो, वा आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्न चाहनुहुन्छ, YouTube आफ्नो मार्केटिङ लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न उत्तम प्लेटफर्म हो।
एक सफल YouTuber हुनुमा तपाईंको ग्राहक आधार निर्माण गर्नु र धेरै संख्यामा शेयर, लाइक र टिप्पणीहरू प्राप्त गर्नु समावेश छ। सेयरहरू, भिडियो हेराइहरू, र टिप्पणीहरू जस्ता मेट्रिकहरू महत्त्वपूर्ण हुँदा, तपाईंको सदस्यहरूको संख्या बढाउनु अझ महत्त्वपूर्ण छ।
गुणस्तरीय सामग्री सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ, तर तपाइँको भिडियो लाखौं समान - वा राम्रो -भिडियोहरूमा दफन हुन सक्छ जुन YouTube मा हरेक दिन अपलोड गरिन्छ। सटीक हुनको लागि, 500 घण्टा भन्दा माथिको भिडियो सामग्री प्रत्येक मिनेट अपलोड गरिन्छ, र YouTube मा हरेक दिन एक अरब घण्टा सामग्री हेरिन्छ।
तपाईंको ग्राहक संख्या बढाउने सबैभन्दा छिटो तरिका हो YouTube ग्राहकहरू खरीद गर्नुहोस् एक प्रतिष्ठित YouTube मार्केटिङ सेवा कम्पनीबाट।
यहाँ के कुराले YouTube लाई एक लोकप्रिय मार्केटिङ उपकरण बनाउँछ र तपाईले सदस्यहरू किन्नु पर्ने शीर्ष कारणहरू छन्।
कुन कुराले YouTube लाई लोकप्रिय मार्केटिङ उपकरण बनाउँछ?
प्यू रिसर्च सेन्टरले गरेको २०२१ को सर्वेक्षणले यूएसमा युट्युब सबैभन्दा लोकप्रिय प्लेटफर्म हो, धेरै जसो अमेरिकीहरूले यसलाई अन्य च्यानलहरू भन्दा बढी प्राथमिकता दिने गरेको देखियो।
2005 जब यो सुरु भएको थियो, YouTube ले विश्वको इन्टरनेट जनसंख्याको 95% कभर गर्दै विश्वभरका सयौं देशहरूमा बलियो उपस्थिति स्थापित गरेको छ।
यहाँ SEM Rush द्वारा केहि थप अचम्मका तथ्यहरू र तथ्याङ्कहरू छन् जसले YouTube किन मार्केटरहरूको लागि स्पष्ट विकल्प हो भनेर देखाउँदछ:
युट्युबका हाल विश्वभर २ अर्ब मासिक प्रयोगकर्ता छन्।
YouTube मा पाँच अर्ब भिडियोहरू प्रत्येक दिन हेरिन्छन् जुन प्रति दिन एक अरब घण्टा भिडियो सामग्री खपतमा अनुवाद हुन्छ।
74 प्रतिशत अमेरिकी वयस्कहरूले YouTube भिडियोहरू हेर्छन्।
दर्शकहरूले YouTube भिडियोहरूमा औसत चालीस मिनेट खर्च गर्छन्।
2022 सम्म, अनुमानित 210 मिलियन मानिसहरूले यूएसमा YouTube भिडियोहरू हेर्नेछन्
Millennials बाहेक, सबैभन्दा छिटो बढ्दो जनसांख्यिकीयमा 50 देखि 65 वर्षका (बेबी बुमर्स) र 36- देखि 49 वर्षका (जेनेरेसन X) समावेश छन्।
2019 मा, संसारभर2बिलियन मानिसहरूले लग इन गरे र प्रत्येक दिन एक अरब घण्टा YouTube भिडियोहरू हेरे।
YouTube ले विश्वको भिडियो स्ट्रिमिङ ट्राफिकको लगभग एक चौथाइको लागि खाता बनाउँछ, Netflix पछि दोस्रो।
मनोरञ्जन बाहेक, मानिसहरू समाचार, जानकारी, व्यावसायिक कामलाई बलियो बनाउन, र कम्पनी र ब्रान्डहरू फलो गर्न YouTube भिडियोहरू हेर्छन्।
१० मध्ये छ जनाले लाइभ टिभीमा भिडियो हेर्न रुचाउँछन्
YouTube सदस्यहरू खरीद गर्न शीर्ष कारणहरू
लोकप्रियता प्राप्त गर्नुहोस्
YouTube निस्सन्देह तपाइँको प्रतिभा प्रदर्शन गर्न वा तपाइँको काम को बारे मा जागरूकता फैलाउन को लागी एक उत्तम प्लेटफर्म हो। सफल 'YouTubers' इन्टरनेट संसारका सबैभन्दा प्रसिद्ध व्यक्तिहरू मध्ये केही हुन्। चाहे तिनीहरूले गेमिङ भिडियोहरू, यात्रा भ्लगहरू, वा 'कसरी गर्ने' भिडियोहरू पोस्ट गर्दै छन्, यी लोकप्रिय YouTubersहरूले आफ्नो ब्रान्ड निर्माण गरेका छन् र YouTube मा आफ्नो शिल्प प्रदर्शन गरेका छन्। एक सफल YouTuber बन्ने पहिलो चरण लोकप्रियता प्राप्त गर्न हो।
YouTube मा केहि सबैभन्दा लोकप्रिय भिडियो कोटिहरू हुन्:
उत्पाद समीक्षा - 2017 देखि, YouTube दर्शकहरूले मोबाइल उपकरणहरूमा 50,000 वर्ष भन्दा बढी उत्पादन समीक्षा भिडियोहरू हेरिसकेका छन्। ग्राहकहरूलाई खरिद गर्न उत्प्रेरित गर्न विश्वसनीय समीक्षाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। उत्पादन समीक्षा भिडियोहरूले दर्शकहरूलाई उत्पादनको प्रदर्शन हेर्न र समीक्षकबाट प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।
अनबक्सिंग भिडियोहरू - अनबक्सिङ भिडियोहरूले दर्शकहरूको खरिद निर्णयहरूमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। तिनीहरू ब्रान्डहरूका लागि तिनीहरूका नयाँ उत्पादनहरू वा सेवाहरूको जागरूकता फैलाउने प्रभावकारी तरिका पनि हुन्।
शैक्षिक भिडियोहरू - दर्शकहरूले फेसन प्रवृत्ति, दृश्य कला, इतिहास, गणित, व्यापार, र अन्य विषयहरूको बारेमा YouTube भिडियोहरू मन पराउँछन्।
भिडियो भिडियो - 'द हाइलाइटर च्यालेन्ज' देखि "मेरो बारेमा रमाईलो र अनियमित तथ्यहरू," ट्याग र चुनौती भिडियोहरू धेरै लोकप्रिय छन्। यो भिडियो ढाँचाले प्रयोगकर्ताहरूलाई सिर्जनाकर्ताहरूलाई अनौठो तरिकामा चुनौतीहरू गरेको हेर्न प्रोत्साहित गर्छ।
हास्य - कमेडी भिडियोहरू 'भाइरल' स्थितिमा पुग्ने उच्च सम्भावना भएका ढाँचाहरू हुन्।
गेमिङ - 'Minecraft' देखि 'League of Legends' सम्म, गेमिङ भिडियोहरू YouTube मा लोकप्रिय कोटी हुन्।
Vlogs - भ्लग वा भिडियो ब्लगहरूले अनुयायीहरूलाई 'वास्तविक' तपाईंलाई हेर्न र तपाईंसँग जडान गर्न अनुमति दिन्छ। शीर्ष भ्लगरहरूसँग सामान्यतया लाखौं सदस्यहरू छन्।
जब तपाइँ तपाइँको आलामा उच्च-गुणस्तरको भिडियो बनाउनुहुन्छ र यसलाई पोस्ट गर्नुहुन्छ, त्यहाँ तत्काल सफलताको कुनै ग्यारेन्टी छैन। यो भाइरल YouTubers सँग तत्काल इन्टरनेट प्रसिद्धिको लागि गोप्य, जादुई सूत्र छ जस्तो लाग्न सक्छ। तिनीहरू केवल एक भिडियो र पोस्ट रेकर्ड गर्छन्, र लाखौं हेराइहरू र सदस्यहरू पछ्याउँछन्। यद्यपि यसले सेलिब्रेटीहरू र लोकप्रिय च्यानलहरूको लागि काम गर्न सक्छ, शुरुआतीहरूले YouTube सदस्यहरू खरिद गरेर गति जम्पस्टार्ट गर्न आवश्यक हुनेछ।
यदि कुनै YouTube भिडियोको CTR (क्लिक-थ्रु दर) 10 प्रतिशत भन्दा बढी, 50 प्रतिशत रिटेन्सन, र औसत हेराइ समयको चार मिनेट छ भने "राम्रो" मानिन्छ।
क्लिक-थ्रु दर वा CTR को थम्बनेल छापहरू (टिजर भिडियो) द्वारा तपाईंको भिडियोमा क्लिकहरूको संख्या विभाजित गरेर गणना गरिन्छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाइँको भिडियो थम्बनेल 1,00 पटक हेरिएको छ र 10 व्यक्तिहरूले भिडियोमा क्लिक गरे भने, क्लिक-थ्रु दर 10 प्रतिशत हो।
YouTube खातामा सदस्यहरूको संख्या जति बढी हुन्छ, CTR, रिटेन्सन, र हेराइको समय बढाउने सम्भावनाहरू त्यति नै राम्रा हुन्छन्।
एक अनुमान अनुसार युट्युबमा तपाईको पहिलो हजार सब्सक्राइबर पाउन झन्डै दुई वर्ष लाग्न सक्छ। यो च्यानलमा छिट्टै आफ्नो छाप बनाउन खोजिरहेका मानिसहरूका लागि यो एकदमै ढिलो र निराशाजनक अनुभव हुन सक्छ।
जब तपाइँ YouTube सदस्यहरू खरीद गर्नुहुन्छ, तपाइँ गति निर्माण र कायम राख्न सक्नुहुन्छ। YouTube सदस्यहरू खरिद गर्दा अन्य YouTube प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि सन्देश पठाउनेछ कि तपाईंको सामग्री लोकप्रिय र मूल्यवान छ।
एक पटक तपाईंको सदस्यहरूको संख्या बढ्दै जाँदा, यसले तपाईंको भिडियो जाँच गर्न र तपाईंको च्यानलको सदस्यता लिनको लागि धेरै मानिसहरूलाई आकर्षित गर्नेछ।
आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न मोबाइल जानुहोस्
के तपाइँसँग बहु-च्यानल मार्केटिङ रणनीति छ? मोबाइल मार्केटिङ एक डिजिटल मार्केटिङ रणनीति हो जुन ट्याब्लेट र स्मार्टफोन सहित मोबाइल उपकरणहरूमा दर्शकहरूमा पुग्नको लागि हो। सन् २०२० मा हालसम्म २९ करोड अमेरिकीहरू मोबाइल फोन प्रयोगकर्ता रहेको तथ्याङ्कले अनुमान गरेको छ। 290 प्रतिशतको स्मार्टफोन प्रवेशलाई हेर्दा, अमेरिका मोबाइल फोन मालिकहरूको हिसाबले विश्वमा चौथो स्थानमा छ।
ग्राहकहरूले आफ्नो ध्यान मोबाइल उपकरणहरूमा सार्दै, मार्केटरहरूले मोबाइल मार्केटिङको साथ आफ्ना लक्षित दर्शकहरूसँग ओम्निच्यानल संलग्नतालाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्। मोबाइल मार्केटिङमा एसएमएस वा चिसो कलहरू मार्फत ब्रान्ड सन्देशहरू पठाउन समावेश हुन सक्छ। यी पुश मार्केटिङ रणनीतिहरूमा लामो र छोटो अवधिको कमजोरीहरू छन्। उपभोक्ताहरूले सजिलैसँग कलहरू रोक्न र विज्ञापनहरू पुश गर्न सक्छन्। मार्केटरहरूको लागि, लगानीमा रिटर्न ट्र्याक गर्न र एक विशिष्ट ग्राहक आधारलाई लक्षित गर्न पुश मार्केटिङको साथ गाह्रो हुन्छ।
YouTube मोबाइल उपकरणहरूमा इनबाउन्ड वा पुल मार्केटिङ दृष्टिकोणको लागि पूर्ण रूपमा उपयुक्त छ। इनबाउन्ड मार्केटिङ मार्फत, ब्रान्डहरूले आफ्ना लक्षित ग्राहकहरूलाई संलग्न गर्न र आमन्त्रित गर्न र बलियो सम्बन्धहरू निर्माण गर्न सक्छन्।
HubSpot द्वारा यी तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ किन YouTube मोबाइल मार्केटिङको लागि सही विकल्प हो:
अधिकांश वयस्कहरू (७५ प्रतिशत) आफ्नो मोबाइल यन्त्रहरूमा YouTube भिडियोहरू हेर्छन्।
YouTube ले कुनै पनि केबल नेटवर्कको तुलनामा एक हप्तामा १८ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका धेरै मानिसहरूलाई मोबाइल उपकरणहरूमा पुग्छ।
YouTube हेर्ने समयको तीन चौथाइ भन्दा बढी मोबाइल उपकरणहरूमा छ।
गुगलको एक अध्ययनले स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरूले YouTube मा ब्रान्डेड सामग्री वा विज्ञापनहरूमा ध्यान दिने सम्भावना १.४ गुणा बढी रहेको देखाउँछ।
शोधकर्ताहरूले यो पनि फेला पारे कि स्मार्टफोन भिडियो दर्शकहरूले टिभी दर्शकहरूको तुलनामा मोबाइल उपकरणहरूमा भिडियो सामग्री प्रस्ताव गर्ने ब्रान्डहरूसँग जोडिएको महसुस गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। र सबै भन्दा माथि, 2020 को एक अध्ययनले देखाएको छ कि 70 प्रतिशत दर्शकहरूले YouTube मा ब्रान्डको भिडियो हेरे पछि खरिद गरेका थिए।
आफ्ना मोबाइल यन्त्रहरूमा ब्रान्डेड भिडियोहरू हेरेपछि दर्शकहरूले गर्ने अन्य कार्यहरू समावेश छन्:
ब्रान्डको वेबसाइट वा स्टोरमा जानुहोस्।
अरूसँग ब्रान्डको बारेमा कुरा गर्नुहोस्।
सकारात्मक रूपमा ब्रान्ड, सेवा, वा उत्पादन बारे आफ्नो विचार परिवर्तन गर्नुहोस्।
सेवा, उत्पादन, वा कम्पनी बारे ब्रान्डेड भिडियो सामग्री साझेदारी गर्नुहोस्।
विजयी मोबाइल मार्केटिङ रणनीति सिर्जना गर्ने एउटा स्मार्ट तरिका भनेको YouTube मा ब्रान्डिङ भिडियोहरू सिर्जना गर्नु र YouTube सदस्यहरू खरिद गरेर फराकिलो दर्शकहरूमाझ प्रचार गर्नु हो। मानिसहरू सामाजिक सञ्जालमा के हेर्ने र कस्तो प्रकारको सामग्री उनीहरूको समयको लायक छ भनेर निर्णय गर्न संकेतहरूको खोजीमा छन्। यदि तपाईंको YouTube खातामा हजारौं सदस्यहरू छन् भने, यो एक सम्मानित खाताको रूपमा खडा हुन्छ जुन धेरै मानिसहरूले फलो गरिरहेका छन्।
आफ्नो मार्केटिङ प्रयासहरू पूरक
ब्रान्डहरूका लागि, YouTube मार्केटिङ रणनीति हुनु उच्च प्राथमिकता हो। आकर्षक भिडियोहरूले ब्रान्ड मेमोरी बढाउन र सम्झाउन मद्दत गर्दछ किनभने पाठ सन्देशहरूको तुलनामा भिजुअलहरू छिटो प्रशोधन गरिन्छ। YouTube भिडियोहरूले तपाईंको व्यवसायलाई तपाईंको वेबसाइट वा ई-वाणिज्य स्टोरमा ट्राफिक ड्राइभ गर्न, रूपान्तरण बढाउन र फराकिलो दर्शक आधारमा पुग्न मद्दत गर्न सक्छ। YouTube को उपस्थितिले तपाइँको लक्षित दर्शकहरूलाई तपाइँलाई खोज इन्जिनहरूमा फेला पार्न सजिलो बनाउँछ। तपाईं YouTube लाइभ स्ट्रिमहरूको साथ प्रत्यक्ष घटना प्रसारण गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंको ब्रान्ड र उत्पादन वा सेवालाई फराकिलो श्रोताहरूलाई लागत-प्रभावी तरिकामा उजागर गर्दछ।
तपाईंको YouTube मार्केटिङ रणनीतिले तपाईंलाई चाहिएको नतिजा दिने उच्च मौका छ जब तपाईंसँग बलियो ग्राहक आधार छ।
युट्युब सब्सक्राइबर सूची किन्नु भनेको तपाइँको युट्युब मार्केटिङ प्रयासहरु लाई पूर्ति गर्ने राम्रो तरिका हो। यसले तपाईंलाई चाँडै नयाँ अनुयायीहरू प्राप्त गर्न र लाइकहरू, टिप्पणीहरू, र साझेदारीहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। थप सदस्यहरूसँग, तपाईं एक व्यापक इमेल सूची निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ जसले रूपान्तरण र संलग्नता बढाउनमा मुख्य भूमिका खेल्छ।
एक ग्राहक सूचीले न्यानो लीडहरू प्रदान गर्दछ जुन तपाईं फलो-अप गर्न, संलग्न हुन र अन्ततः ग्राहकहरूमा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब सब्सक्राइबर गणना महत्त्वपूर्ण रैंकिंग कारकहरू मध्ये एक हो। सक्रिय YouTube सदस्यहरू खरिद गर्नाले तपाईंको व्यवसायलाई थप मान्यता प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ। जति धेरै तपाइँको सदस्य गणना हुन्छ, तपाइँको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयता बलियो हुन्छ जसले तपाइँको च्यानलमा अधिक जैविक सदस्यहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ।
धेरै मानिसहरूले YouTube च्यानल सुरु गर्नुको एउटा कारण केही पैसा कमाउनु हो। युट्युबमा वार्षिक छ अंक कमाउने च्यानलहरूको संख्या वार्षिक रूपमा ४० प्रतिशतले बढेको छ भने वार्षिक १०,००० डलर कमाउने च्यानलहरू ५० प्रतिशतले बढेको छ।
धेरै सफल YouTubers ले YouTube बाट छ अंकको आम्दानी गरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि, व्यक्तिगत वित्त YouTuber Nate O'Brien का 1.1 मिलियन सदस्यहरू छन् र एक वर्षमा विज्ञापन राजस्वमा $ 444,000 कमाए। PewDiePie र Smosh जस्ता शीर्ष YouTube ताराहरूले $8.5 मिलियन देखि $12 मिलियन सम्म कमाई गर्छन्।
YouTube बाट पैसा कमाउन सुरु गर्न, तपाइँसँग पछिल्लो बाह्र महिनामा न्यूनतम हजार सदस्यहरू साथै 4000 सार्वजनिक हेराइ घण्टाहरू हुन आवश्यक छ। जब तपाइँ यी धेरै सदस्यहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाइँ YouTube ले प्रस्ताव गर्ने साझेदार कार्यक्रमको लागि योग्य हुनुहुनेछ। यसले तपाईंलाई सदस्यताहरू, विज्ञापनहरू, व्यापारिक वस्तुहरूको बिक्री, र च्यानल सदस्यताहरूबाट आम्दानी गर्न अनुमति दिन्छ।
Google Adsense: साझेदारीले तपाईंलाई उपकरणहरूमा पहुँच दिन्छ जसले तपाईंलाई Google AdSense मार्फत तपाईंको भिडियोहरू मुद्रीकरण गर्न अनुमति दिन्छ। अधिकांश YouTube सेलिब्रेटीहरूले Google AdSense बाट आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा कमाउँछन्। उदाहरणका लागि, यदि तपाइँसँग 1,000,000 सदस्यहरू छन् जसले एक हप्तामा तपाइँका दुईवटा भिडियोहरू हेर्छन्, तपाइँ AdSense बाट मात्र $ 36,000 सम्म कमाउन सक्नुहुन्छ।
अनुमान अनुसार, प्रति दिन २०,००० भ्यूहरूले तपाईंलाई औसतमा $२८ देखि $४७ प्रति दिन कमाउन मद्दत गर्न सक्छ, मासिक आम्दानी $४६० देखि $७६९ सम्म। यदि प्रति दिन हेराइहरूको संख्या स्थिर रहन्छ भने, तपाइँ प्रति वर्ष $ 20,000 देखि $ 28 कमाउन सक्नुहुन्छ।
माल बिक्री: YouTube साझेदारहरूले YouTube खातामा यो सुविधा सक्षम गरेर व्यापारका बाह्र वस्तुहरू बेच्न सक्छन्। केही सेलिब्रेटीहरूले आफ्ना फ्यानहरूलाई व्यापारिक वस्तुहरू बेचेर करोडौं कमाएका छन्। PewDiePie, स्विडेनी भिडियो-गेम स्टार, YouTube मा 98 मिलियन सदस्यहरू छन् र व्यापारिक सामानहरू बेचेर प्रति महिना $ 6.8 मिलियन कमाउँछ। तपाइँ तपाइँको च्यानल मा तपाइँको व्यापारिक सामान/उत्पादन को प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ।
च्यानल सदस्यता: जब तपाइँ तपाइँको YouTube च्यानलमा 1000 सदस्यहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको खातामा च्यानल सदस्यता सुविधा सक्षम गरेर पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंका अनुयायीहरू र प्रशंसकहरूले लाइभ च्याटहरू, विशेष भिडियोहरू र ब्याजहरू सहित बोनस सामग्री प्राप्त गर्न मासिक भुक्तानीहरू गर्छन्। YouTube मा शीर्ष भिडियो सिर्जनाकर्ताहरूले च्यानल सदस्यताहरू मार्फत प्रत्येक महिना $ 40,000 कमाउँछन्।
प्रभावकारी मार्केटिंग: तपाइँको आलामा निर्भर गर्दै, तपाइँ सम्बद्ध मार्केटिङ, प्रायोजन, र अनलाइन पाठ्यक्रमहरूसँग तपाइँको आम्दानीका स्रोतहरू विविधीकरण गर्न सक्नुहुन्छ। च्यानलमा आफ्नो ब्रान्ड वा उत्पादनको प्रचार गर्न व्यवसायहरूले YouTubers लाई फलोअरको राम्रो रकम भुक्तानी गर्छन्। लोकप्रिय YouTube सिर्जनाकर्ताहरू समान रूपमा छन्, यदि सेलिब्रेटीहरू र प्रभावकारहरूको तुलनामा ब्रान्ड जागरूकता प्रवर्द्धनमा बढी प्रभावकारी छैनन्। YouTube प्रभावकारीहरूले सामान्यतया इन्स्टाग्राम पोष्टहरूको तुलनामा ब्रान्डहरूलाई बढावा दिन उच्च मूल्यहरू आदेश दिन्छन्। यदि तपाइँसँग 2000k सदस्यहरू छन् भने तपाइँ प्रति भिडियो $ 100 कमाउन सक्नुहुन्छ।
एक अध्ययनका अनुसार, एक मध्य-स्तर प्रभावकर्ताले आफ्नो YouTube खातामा ब्रान्ड प्रवर्द्धन गर्न प्रति 2,000 सदस्यहरू $ 100,000 शुल्क लिन्छ।
वास्तविक सदस्यहरूलाई आकर्षित गर्नुहोस्
मार्केटरहरूले बिक्री र संलग्नता बढाउनको लागि 'बथान मानसिकता' भनेर चिनिने लाभ उठाउँछन्। हर्ड मानसिकताले मानिसहरूलाई अरूले केही गर्नको लागि कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने बुझाउँछ किनभने धेरैजसो मानिसहरूले यो गरिरहेका छन्।
सामाजिक जनावरहरूको रूपमा, हामी निर्णय गर्न अरूबाट जानकारीमा भर पर्छौं। क्यारियर छनौटहरू, वार्डरोबहरूमा राजनीतिक झुकाव, हाम्रा झुकावहरू सामान्यतया हाम्रो सामाजिक अवलोकनहरूद्वारा आकार हुन्छन्। मनोवैज्ञानिकहरूले अध्ययन गरे कि कसरी सामाजिक शिक्षा रणनीतिहरूले मानिसको सामूहिक बुद्धिलाई आकार दिन्छ।
तिनीहरूले फेला पारे कि मानिसहरूले अरूको प्रतिलिपि गर्ने झुकाव राख्छन्, र एक निश्चित छनोट गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या जति धेरै अन्य मानिसहरूले तिनीहरूलाई प्रतिलिपि गरे। यो उस्तै तरिका हो जुन मानिसहरूले तिनीहरूको डाउनलोड तथ्याङ्कहरूमा आधारित एपहरू छनौट गर्छन् वा ठूलो फलोअरहरू भएका सामाजिक मिडिया खाताहरू पछ्याउनुहोस्। यो पनि सत्य हो कि जब मानिसहरूले धेरै सदस्यहरू, हेराइहरू, र लाइकहरू भएको भिडियो खोजी र फेला पार्छन्, तिनीहरूले त्यो भिडियोलाई पछ्याउने निर्णय गर्छन्। जब दर्शकहरूले भिडियोको पहुँच कम छ भन्ने देख्छन्, तिनीहरू सामग्री हेर्न लायक छैन भनी मान्छन्। तिनीहरू चाँडै अघि बढ्न सक्छन् र अधिक दर्शकहरू भएको अधिक लोकप्रिय YouTube च्यानलबाट समान भिडियो खोज्न सक्छन्।
तपाईंको YouTube च्यानलका लागि सदस्यहरूको कमीले तपाईंको भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट वा सेयरहरू प्राप्त गर्ने सम्भावनालाई पनि कम गर्नेछ किनभने दर्शकहरू यो जानकारीको भरपर्दो स्रोत हो कि छैन भन्ने बारे निश्चित छैनन्। जब तपाइँ सब्सक्राइबरहरूको लागि भुक्तान गर्नुहुन्छ, तपाइँ अरू मानिसहरूलाई 'बथान मानसिकता' को कारणले तपाइँको अनुयायी र सदस्य बन्ने सम्भावनाहरू सुधार गर्नुहुनेछ।
आफैलाई एक अधिकारीको रूपमा स्थापित गर्नुहोस्
YouTube सदस्यहरू खरिद गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको तपाईंको ब्रान्ड/व्यक्तिगत ब्रान्डको अधिकार बढाउनु हो। तपाईको युट्युब च्यानलमा धेरै सदस्यहरू हुनु भनेको मुट्ठीभर सदस्यहरूको तुलनामा तपाईं स्थानमा गम्भीर खेलाडी हुनुहुन्छ भन्ने संकेत गर्दछ। माथि हाइलाइट गरिए अनुसार, एक ठूलो ग्राहकले तपाईंलाई थप पैसा कमाउने, अन्य पेशेवरहरू र प्रभावकारहरूसँग सहकार्य गर्ने अवसरहरू खोल्छ।
SEM rush द्वारा 2019 को अध्ययन अनुसार, 48 प्रतिशत मानिसहरूले YouTube ले अर्को पाँच वर्षमा जनसम्पर्क सञ्चारको प्रभावकारिता बढाउन शीर्ष योगदानकर्ता हुनेछ भनी विश्वास गर्छन्। चाहे तपाइँको स्थान PR, फेसन, स्किनकेयर, वित्त, गेमिङ वा कमेडीमा होस्, YouTube मा धेरै सदस्यहरू प्राप्त गर्नाले तपाइँलाई उद्योग विशेषज्ञको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
प्रयास कम गर्नुहोस्
YouTuber को रूपमा तपाईंको सफलतामा सदस्यहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। अवसरहरू मुद्रीकरण गर्ने, पहुँच विस्तार गर्ने, नेटवर्किङमा लोकप्रियता हासिल गर्नेदेखि, ठूलो सदस्य संख्याले धेरै फाइदाहरू प्रदान गर्दछ। प्लेटफर्ममा नयाँ प्रवेश गर्नेहरूका लागि, सदस्यहरू प्राप्त गर्न र विश्वसनीयता निर्माण गर्न चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। तपाईंको पहिलो 1000 अनुयायीहरू प्राप्त गर्न समय-उपभोग गर्दै गर्दा यसलाई निरन्तर प्रयास चाहिन्छ। एक अध्ययनले देखाउँछ, एक हजार सदस्यहरू प्राप्त गर्न दुई वर्षसम्म लाग्न सक्छ।
युट्युब सदस्य संख्या बढाउनमा भिडियोको गुणस्तर, अपलोड फ्रिक्वेन्सी, खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसन (SEO) लाई तपाईंको भिडियोको खोज श्रेणी र अन्य रणनीतिहरूमा ध्यान दिनु समावेश हुन सक्छ। यी प्रयासहरू आवश्यक हुँदा, तपाईंले आफ्नो YouTube भिडियोको सबै पक्षहरू सही रूपमा प्राप्त गर्न धेरै समय समर्पण गर्नुपर्नेछ। उच्च-गुणस्तरको, आकर्षक भिडियो बनाए तापनि सुरुका केही वर्षहरूमा धेरै सदस्यहरू नहुन सक्छन्।
जब तपाइँ सदस्यहरू खरिद गर्नुहुन्छ, यसले द्रुत समयमा र न्यूनतम प्रयासमा तपाइँका अनुयायीहरूको आधार निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ। तपाइँको सदस्य संख्याको बारेमा चिन्ता गर्नुको सट्टा, तपाइँ तपाइँको लक्षित दर्शकहरूलाई अपील गर्ने नयाँ, आकर्षक भिडियोहरू सिर्जना गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ।
Aherfs को अनुसार, Google खोज पृष्ठहरू र YouTube मा उच्च श्रेणीकरण डिजिटल मार्केटरहरूको लागि उच्च प्राथमिकता हो किनभने:
68 प्रतिशत अनलाइन अनुभवहरू खोज इन्जिनबाट सुरु हुन्छन् - यदि तपाइँ खोज इन्जिनमा उच्च श्रेणीमा हुनुहुन्छ भने मानिसहरूले तपाइँको भिडियो फेला पार्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
७५ प्रतिशत गुगल खोजकर्ताहरू पहिलो पृष्ठको नतिजाभन्दा बाहिर जान सक्दैनन्, र केवल ०.७८ प्रतिशत प्रयोगकर्ताहरूले दोस्रो पृष्ठको खोज परिणामहरूमा क्लिक गर्छन्।
त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन तपाईंले Google मा आफ्नो YouTube भिडियो रैंकिंग बढाउन गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा सही कुञ्जी शब्दहरू फेला पार्ने र प्रयोग गर्ने समावेश छ (यी शब्दहरू तपाईंको लक्षित दर्शकहरूले तपाईंको जस्तै सामग्री खोज्न प्रयोग गर्दैछन्), YouTube ट्यागहरू थप्ने, र तपाईंको YouTube भिडियो गुणस्तर अनुकूलन गर्ने। तथापि, सब्स्क्राइबरको संख्या बढाउनु सबैभन्दा छिटो तरिका हो।
नील पटेलका अनुसार, युट्युबले निम्न आधारमा भिडियोहरू क्रमबद्ध गर्दछ:
ट्रस्ट बारीमा एक YouTube च्यानलको हेराइ र अधिकार बाहेक सदस्यहरूको संख्यासँग जोडिएको हुन्छ। अध्ययनहरूले देखाउँछ कि YouTube भिडियोमा लाइक, हेराइ, टिप्पणीहरू, र साझेदारीको संख्या उच्च YouTube र्याङ्किङ्गसँग दृढ रूपमा सम्बन्धित छ। YouTube सदस्यहरूको लागि भुक्तान गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कारण यो हो कि तपाईंले आफ्नो भिडियोमा मनपर्ने, हेराइहरू र टिप्पणीहरू थप वास्तविक सदस्यहरू प्राप्त गरेर र आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ।
धेरै सदस्य भएका युट्युब च्यानलहरूले गुगल र युट्युबमा साइटमा गरिएका खोजहरूमा प्राथमिकता प्राप्त गर्छन्। YouTube को एल्गोरिदमहरूले भिडियोहरू श्रेणीकरण गर्न प्रयोग गर्ने सदस्यहरूको संख्या पनि एक प्रमुख कारक हो। टिप्पणी वा लाइकहरू एक पटकका कार्यहरू भए तापनि सदस्यताहरूले तपाईंले नियमित रूपमा सिर्जना गर्नुभएको भिडियो सामग्री मानिसहरूले हेर्नेछन् भनी जनाउँछ। तपाईंले YouTube को लागि प्रस्ताव गर्नुभएको मूल्यलाई प्रतिबिम्बित गर्न यसले केन्द्रीय भूमिका खेल्छ।
यो कारण हो कि अधिकांश YouTubers सदस्यता प्रोत्साहन गर्दछ।
तपाईका सदस्यहरू जहाँबाट आए पनि, धेरै सदस्यहरू हुनुले तपाईको SEO अनुकूलन गर्न मद्दत गर्दछ। यसले तपाईंको भिडियो ठूलो दर्शक आधारद्वारा फेला परेको र हेरिएको सुनिश्चित गर्दछ। फलस्वरूप, तपाईंको सामग्री हेर्ने मानिसहरूको संख्या जति बढी हुन्छ, तपाईंको YouTube च्यानलको लागि अर्गानिक सदस्यहरूको प्रवाह उच्च हुन्छ।
मानिसहरूलाई टिप्पणीहरू छोड्न सोध्नुले YouTube मा तपाईंको भिडियो रैंकिंग बढाउन पनि काम गर्नेछ। तपाइँको ग्राहक आधार निर्माण गर्नु उच्च श्रेणीको लागि यी रणनीतिहरू अपनाउने पहिलो चरण हो।
आफ्ना सदस्यहरूलाई संलग्न गर्नुहोस्
तपाईंले भर्खरै YouTuber को रूपमा सुरु गरिरहनुभएको बेला राम्रो ग्राहक आधारले तपाईंको आत्मविश्वास बढाउँछ। केही समयदेखि युट्युब भिडियोहरू सिर्जना गर्दै आएका तर आफ्नो ग्राहक आधार बनाउन नसकेकाहरूका लागि पनि यो लागू हुन्छ।
एकचोटि तपाईंसँग महत्त्वपूर्ण मात्रामा सदस्यहरू र हेराइहरू भएपछि, तपाईंले नियमित रूपमा ताजा सामग्री थप्न उत्प्रेरित महसुस गर्नुहुनेछ। आफ्नो कला, संगीत, यात्रा, खाना, वा आफ्नो पेशा मा आफ्नो वास्तविक सदस्य संलग्न गर्न भिडियो बनाउनुहोस्।
त्यसपछि तपाईं आफ्नो वास्तविक सदस्यहरूलाई स्वागत गर्न र तिनीहरूलाई मूल्यवान र विशेष महसुस गराउन व्यक्तिगत भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंको भिडियोमा मूल वाटरमार्क थप्नुले तपाईंको भिडियोलाई सुरक्षित मात्र गर्दैन तर दर्शकहरूलाई यसमा क्लिक गर्न र तपाईंको च्यानलको सदस्यता लिन सक्षम बनाउँछ। सदस्यता बटन स्वचालित रूपमा तपाईंको मूल वाटरमार्कमा देखा पर्दछ।
तपाईंका सदस्यहरूलाई संलग्न गराउनुमा तिनीहरूको रुचिलाई अपील गर्ने भिडियोहरू बनाउन पनि समावेश हुनेछ। यहाँ HubSpot द्वारा केहि तथ्याङ्कहरू छन् जसले YouTube दर्शकहरूले मन पराउने सामग्रीको प्रकार देखाउँछन्:
संगीत भिडियोहरू YouTube मा सबैभन्दा लोकप्रिय मध्ये एक हो।
किनमेल-सम्बन्धित भिडियोहरू हालको समयमा पाँच गुणा बढी हेराइ घण्टा थिए।
YouTube ले 70 प्रतिशत दर्शकहरूलाई ब्रान्डहरू बारे सचेत बनाउँछ।
दर्शकहरूले YouTube मा हेरेको उत्पादन खरिद गर्ने सम्भावना दोब्बर हुन्छ।
अन्य प्लेटफर्महरूको तुलनामा, दर्शकहरूले YouTube मा सेवा, उत्पादन वा ब्रान्डको बारेमा जानकारी खोज्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
YouTube मा ट्यूटोरियल भिडियोहरू YouTube प्रयोगकर्ताहरूले उत्पादन म्यानुअल वा निर्देशनहरू पढेर प्राथमिकता दिन्छन्।
YouTube हेर्ने मुख्य कारणहरू मनोरञ्जन र आराम महसुस गर्नु हो।
साबुन काट्ने जस्ता रिलेक्सेसन भिडियोहरूले हेर्ने समय 70 प्रतिशत बढाएको थियो।
कमेडी र "कसरी गर्ने" भिडियोहरू अन्य लोकप्रिय YouTube सामग्री कोटीहरू हुन्।
YouTube एल्गोरिदम बढाउनुहोस्
YouTube एल्गोरिदम विशिष्ट छ र YouTube दर्शकहरूले हेर्ने भिडियोहरूको लगभग तीन-चौथाई निर्णय गर्दछ। YouTube सिफारिसहरू सदस्यहरू, दर्शकहरूको इतिहास, हेराइको समय, सान्दर्भिकता र संलग्नता जस्ता बहु मेट्रिकहरूमा आधारित हुन्छन्। सदस्यहरू किन्नुको मुख्य कारण भनेको एल्गोरिदमले तपाईंको भिडियोलाई थप दर्शकहरूलाई सुझाव दिने सम्भावना छ।
YouTube सदस्यहरू खरिद गर्न सजिलो र छिटो छ
यदि तपाईं सदस्यताहरू किन्नको लागि सही साइट खोज्ने बाधाहरूको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ भने, यहाँ सरल समाधान छ। YTpals एक अग्रणी साइट हो YouTube ग्राहकहरू खरीद गर्नुहोस्। तपाईं छिटो परिणाम र खरीद को एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया आशा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले पहिलो 50 YouTube सदस्यहरू $ 20 को रूपमा कममा किन्न सक्नुहुन्छ, जबकि 5000 हेराइहरू $ 60 को मूल्यमा छन्।
तपाइँ तपाइँको ग्राहक आधार, लाइक, कमेन्ट, र सेयरहरू निर्माण गर्ने तपाइँको बाटो छिटो ट्र्याक गर्न नि: शुल्क YouTube भ्यूहरू पनि रोज्न सक्नुहुन्छ।
YTpals सँग YouTube लाईक, कमेन्ट, हेर्ने समय, र सेयरहरूको लागि प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण पनि छ जसले तपाईंको YouTube मार्केटिङ रणनीतिलाई बढाउन सक्छ। जब तपाइँ सदस्यहरूको लागि भुक्तानी गर्नुहुन्छ, तपाइँ तिनीहरूलाई 24 घण्टा भित्र प्राप्त गर्न सुरु गर्नुहुनेछ। एकचोटि तपाईंले YouTube मा सदस्यहरू प्राप्त गर्ने मूर्त लाभहरू देख्नुभएपछि, तपाईंले क्रमशः 100, 500, वा बढीमा सदस्यहरूको संख्या बढाउन सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँ टिप्पणीहरू खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने, YTpals ले किफायती दरहरूमा अनुकूलन टिप्पणीहरू प्रदान गर्दछ। तपाईंले आफ्नो YouTube भिडियोको लागि तुरुन्तै दस अनुकूलन टिप्पणीहरू किन्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंले कम मूल्यमा अपलोड गर्नुभएको छ। तपाइँ प्रतिस्पर्धी मूल्य बिन्दुहरूमा 30 वा 50 टिप्पणीहरू पनि किन्न सक्नुहुन्छ। जब यो लाइकको कुरा आउँछ, YTpals ले $200 मा 20 YouTube लाईकहरू प्रदान गर्दछ।
ती सबैलाई बन्डलको रूपमा किन्दा तपाईंले आफ्नो YouTube च्यानललाई सफलताको नयाँ स्तरहरूमा लैजान आवश्यक पर्ने ठोस आधार प्रदान गर्नेछ।
500,000+ ग्राहकहरु द्वारा विश्वास गरिएको
हाम्रा ग्राहकहरूले के भनिरहेका छन् हेर्नुहोस् जब उनीहरू YouTube ग्राहकहरू खरीद गर्छन्
हामी अधिक YouTube मार्केटिंग सेवा प्रस्ताव गर्दछौं
YouTube वाच घण्टा
सेवा 50 YouTube सदस्यहरू ($ 20) 100 YouTube सदस्यहरू ($ 30) 300 YouTube सदस्यहरू ($ 45) 500 YouTube सदस्यहरू ($ 60) 1000 YouTube सदस्यहरू ($ 100) 2000 YouTube सदस्यहरू ($ 180)
भाडोमा हाल भाडोमा हाल भाडोमा हाल भाडोमा हाल भाडोमा हाल भाडोमा हाल
सुरक्षित र निजी डेलिभरी
२very-24 ST घण्टामा STARTS वितरण
वितरण पूरा नभएसम्म दैनिक CONTINUES
एक पटक थोक खरीद - कुनै रिकरिंग छैन
सेवा 1000 YouTube दृश्यहरू ($ 20) 5000 YouTube दृश्यहरू ($ 60) 10000 YouTube दृश्यहरू ($ 100) 25000 YouTube दृश्यहरू ($ 200) 50000 YouTube दृश्यहरू ($ 350) 100000 YouTube दृश्यहरू ($ 600)
सेवा 100 YouTube मनपर्छ ($ 13.50) 200 YouTube मनपर्छ ($ 20) 300 YouTube मनपर्छ ($ 25) 600 YouTube मनपर्छ ($ 40) 1200 YouTube मनपर्छ ($ 70) 2500 YouTube मनपर्छ ($ 140) 5000 YouTube मनपर्छ ($ 270) 10000 YouTube मनपर्छ ($ 530) 15000 YouTube मनपर्छ ($ 790) 20000 YouTube मनपर्छ ($ 1050) 30000 YouTube मनपर्छ ($ 1550)
भाडोमा हाल भाडोमा हाल भाडोमा हाल भाडोमा हाल भाडोमा हाल भाडोमा हाल भाडोमा हाल भाडोमा हाल भाडोमा हाल भाडोमा हाल भाडोमा हाल
सेवा 10 कस्टम यूट्यूब टिप्पणिहरु ($ 20) 20 कस्टम यूट्यूब टिप्पणिहरु ($ 35) 30 कस्टम यूट्यूब टिप्पणिहरु ($ 50) 50 कस्टम यूट्यूब टिप्पणिहरु ($ 80)
भाडोमा हाल भाडोमा हाल भाडोमा हाल भाडोमा हाल
सेवा YouTube YouTube हेर्ने समय ($ २)) YouTube YouTube हेर्ने समय ($ २)) YouTube YouTube हेर्ने समय ($ २)) YouTube YouTube हेर्ने समय ($ २))
सेवा 500 YouTube शेयरहरू ($ 30) 1000 YouTube शेयरहरू ($ 50) 2000 YouTube शेयरहरू ($ 80) 5000 YouTube शेयरहरू ($ 130) 10000 YouTube शेयरहरू ($ 250)
भाडोमा हाल भाडोमा हाल भाडोमा हाल भाडोमा हाल भाडोमा हाल
YouTube सदस्यहरू तपाईंको कार्टमा थपिएको छ।
हामीले सोचेका थियौं
१००० अवलोकन ($ २०)१००० अवलोकन ($ २०)१००० अवलोकन ($ २०)१००० अवलोकन ($ २०)१००० अवलोकन ($ २०)१००० अवलोकन ($ २०)
१०० मनपर्‍यो (। १..100०)१०० मनपर्‍यो (। १..200०)१०० मनपर्‍यो (। १..300०)१०० मनपर्‍यो (। १..600०)१०० मनपर्‍यो (। १..1200०)१०० मनपर्‍यो (। १..2500०)१०० मनपर्‍यो (। १..5000०)१०० मनपर्‍यो (। १..10000०)१०० मनपर्‍यो (। १..15000०)१०० मनपर्‍यो (। १..20000०)१०० मनपर्‍यो (। १..30000०)
१० टिप्पणीहरू ($ २०)१० टिप्पणीहरू ($ २०)१० टिप्पणीहरू ($ २०)१० टिप्पणीहरू ($ २०)१० टिप्पणीहरू ($ २०)
उत्पादन सफलतापूर्वक कार्टमा थपियो
कोही भित्र खरिद
YTpals व्यवसाय र व्यक्तिगत YouTube च्यानलहरूको लागि एक अग्रणी सामाजिक मिडिया मार्केटिंग समाधान हो। हामी हाम्रो ग्राहकहरु लाई अधिक सदस्यहरु, दृष्टिकोण, मनपराउँदछन् र टिप्पणीहरु उनीहरुको प्रभाव अनलाइन वृद्धि गर्न मद्दत गर्दछौं।
प्रतिलिपि अधिकार © 2022 YTpals (ytpals.com)। सर्वाधिकार सुरक्षित। साइटमैप
नि: शुल्क YouTube सदस्यहरू
भर्खरै ब्लग ब्लगहरू
तपाईंको YouTube भिडियोहरूमा टिप्पणी गर्न दर्शकहरू प्राप्त गर्ने शीर्ष5तरिकाहरू
YouTube लाई मार्केटिङ प्लेटफर्मको रूपमा प्रयोग गर्ने चतुर तरिकाहरू
तपाईंको YouTube प्रकाशन तालिकाको योजना बनाउनका लागि सुझावहरू
तपाईको YouTube च्यानलको लागि राम्रो रङ योजना के हो?
YouTube एल्गोरिथ्मले तपाइँको सामग्रीलाई दबाउनेसँग कसरी व्यवहार गर्ने?
यस वेबसाइटले तपाइँको उत्तम अनुभव प्राप्त गर्न कुकीहरू प्रयोग गर्दछ।
म स्वीकार छु